news2dago | Jolay 2008 | 3
[Ankapobeny ] 11 Jolay, 2008 07:34
Loza nahatsiravina teny Ivato (Updated)
Namoizana ain'olona 6 be izao ny atadrevaka nataon'ny orinasa iray nisahana ny fandrodanana ny trano tao @ tobin'ny BANI teny Ivato. Ity fandrodanana ity moa dia ao anatin'ny fanitarana ny seranana karakarain'ny Adema. Manjavozavo be ihany moa ny zavatra tena niseho fa ny heno fotsiny dia ny oe tsy mbola nahazo fankatoavana t@ ireo manampahaizana ireo mpiasa nadrodana ilay trano fa avy kosa dia nanatsofa ny andry ampovon'ilay trano ka io no nampirodana avy hatrany ilay tafo ary nanototra ireo mpiasa 6 tao. Voalaza moa fa maty tsy tra-drano avokoa izy ireo.
Hamonjy ny asany any Geneve kosa ny ambasadoaro vaovao Rajemison ka nanao veloma sy nangataka tso-drano tany @ praiminisitra ny tenany omaly. Marihina moa fa @ alahady ho avy izao izy no hanainga.
Tsara karakara tokoa ireo kambana siamois Mahagaga sy Mahalatsa ary nalefa ao @ Pavillon Sainte Fleur moa izy ireo satria ao no misy ny fitaovana arifomba sy mpampivelona manana ny traikefa momba ny fikarakarana ny zaza teraka. Nitsidika azy miralahy moa ny manampahefana ao @ minisitera ny fahasalamana ka nanome ireo kojakoja kely ilain'ny zazakely.
[Ankapobeny ] 10 Jolay, 2008 09:19
Mahamenatra ve ny tsy fahaizana teny vahiny?
Tena vaka ny saiko nahita ireo matoan-dahatsoratra an-gazety mivoaka isan'andro milazalaza ny fiverenan'ny fanagasina indray any @ ireo sekoly ambaratonga fototra. Ny tena moa niaina mihitsy t@ izany andron'ny fanagasina izany kanefa toa mba nahavita fianarana ihany taty aorina, koa tsy dia hitako laotra izay mahalasa resabe azy ity ankehitriny. Ny tena marina dia hitsikerana hatrany ny fomba hitondran'ny mpitondra ankehitriny izy ity ka lasa resaka politika hatrany. Toy ny oe potika ny ankizy malagasy @ fanagasina sy ny sisa. Amiko manokana dia lasa anavahana ny toerana misy eo @ fiarahamonina ny resaka fanagasina ankehitriny satria mahantra ara-toetsaina ny malagasy ka lasa tsy tia ny azy intsony.
Menatra mantsy ny malagasy raha tsy mahafehy ny teny vahiny indrindra raha mandiso ny rafitra sy ny fitsipika @ io teny io noho ny mandiso ny fitsipika sasany @ fanoratana ny teny malagasy. Izaho zao dia anisany faly mihitsy mahita ireo namana mpiblaogy namana manitsy hatrany ny tsipelina disoiko eto @ ity blaogy ity midika izany fa mbola misy ihany ireo tia ny teny malagasy ka sarotiny @ izy io. Indrisy anefa fa marary io teny io ankehitriny satria dia atao ankilabao, tsy mahagaga raha ho simba io afaka taona vitsy ao aoriana ao.
Saika lasa adim-poko kosa ny disadisa ny mpianatra tao Barikadimy Toamasina. Soa ihany fa niravina ihany ny ady teo @ ireo zanak'avaratra sy ny zanak'i Toliara tao aorinan'ny fanelanelanana nataon'ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana. Ny mahalasa saina kely fotsiny dia azon'ireo indray ity maka maka takalon'aina ity ary saika nodoran'izy ireo t@ lasantsy moa ilay azo takalon'aina!!! dia ny olona toy ireny ve dia mba mendrika ny hahazo diplaoma sy hanana ny toerana eo @ fiara-monina. Sao dia mba tokony ho sazina mafy kosa fa tsy any Iraka na any Gaza akory eto Madagasikara.
Vita soamatsara kosa ny fanadinana BEPC ary nilamina ny fizotran'ny fanadinana @ akapobeany. @ 28 jiolay kosa ireo zokiny no hanala ny BAC! koa mirary soa sy fahombiazana hatrany ho an'ireo zandry kely ireo ny tena. Maniry kosa anefa fa mba tsy ho simba ny fankana an-keriny rehefa tonga eny @ anjely manontolo fa mba hianatra, hianatra tsara, hianatra mafy...LOL ianareo no tompon'ny taona 2000! eee fahiny tokoa izany.
Jereo koa eto%